Salaadiinta iyo Wax Garadka Kismaayo oo ku Hawlan Xal U Helidda Qodob la Isku Mari Waayay – idalenews.com
Salaadiinta iyo Wax Garadka Kismaayo oo ku Hawlan Xal U Helidda Qodob la Isku Mari Waayay
Iyadoo uu dib u bilowdey Shirkii Maamul u sameynta Gobolada Gedo iyo Jubbooyinka ayaa wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo waxa ay sheegayaan in Salaaddiinta iyo wax Garadka ku hawlan shirkaasi in haatan ay xal u raadinayaan arrimo muran abuuray oo shirka la soo gudboonaaday.
Arrimaha ay haatan Odoyaashu ku hawlan yihiin ayaa waxaa ka mid ah Erggooyin hor leh oo iminka uun soo gaaray goobtaasi dejintooda iyo hanaanka awood qaybsiga Goboladaasi.
Qaar ka mid ah ka qayb galayaasha Shirkaas ayaa ka dhawaajiyay inuu jiro Muran ka dhashay hanaanka awood qaybsiga ka gadaal markii la soo ban dhigay Gobolka Jubada Dhexe in dhamaantiisa uu gacanta ugu jiro Xarakada Shabaab isla markaana aysan jirin xiliagn Erggo si toos ah ugua timid Gobolkaas.
Arrintan ayaa waxa ay caqabad ku noqotay shirka iyadoo Odoyaasha iyo wax garadkuna ay haatan dadaal ugu jiraan sidii loo dhamayn lahaa Cabqadahaas.
Qaar ka mid ah Mas’uuliyiinta iminka shirkaas ka qayb galaysa oo war baahinta u waran tay ayaa sheegay in dhibaato aysan jirin keliyana qodobka doodad ugu kulul dhaliyay uu yahay Gobolkaas ka maqan Gacanta Maamulka Jubbooyinka iyo sidii laga yeeli lahaa marka ay timaado awood qaybsi.
Shirka ayaa la sheegay in ay iminka ku sugan yihiin mas’uuliyiin ka socota IGAD iyadoona la filayo in sidoo kale Dawladda Federaalkuna ergo kor joogta ah u soo dirto taasoo meesha ka saaraysa Shakigii ahaa in shirka laga yaabo inuu gebi ahaanba bur buro ama meesha ka baxo.
R/wasaaraha oo soo dhaweeyay doorashadii ka dhacday dalka Kenya
Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha dibada Masar oo maanta ku soo jeeda Muqdisho